जानकारी – माहुरी . Bee
यो डिजिटल म्यागाजिन_ब्लग निर्माणकै अवस्थामा रहेको छ। अन्य परिस्थिहरु यथावत रहेमा आगामी जनवरीको १४-१५ तारिखका दिन प्रकाशित गर्नेगरी तयारी भईरहेको छ। प्रस्तुत सामाग्री र डिजाईन नमुनाको लागि (BETA) हो। अहिले पत्राचारको लागि प्रयोग गरिएको म्यागाजिनको नाम (परदेशी) को लागि पनि अझै प्रतिकात्मक र प्रभावकारी शब्दहरु प्रस्तावित छन्; त्यसैले हामीलाई शुभकामना राखेर फलो (ईमेल, सामाजिक संजालमा) गर्दै रहनु होला। हामी तपाईलाई छिट्टै भेटने छौं। साथै तपाईंका लेख रचना पठाउन नभुल्नुहोला प्रतिक्षाको लागि धन्यवाद !
कतिपय सामाग्रीहरु अन्तिम मितिका लागि प्राईवेट गरेर राखिएका छन
Feature images above: Bees from the UN, and Man walking on the mountain from Unsplash
अन्य बिशेष …
विविध बिषयमा जानकारी लिनुहोस
तपाईंको बिचारमा कुन लोगो उपयुक्त होला ?
हामीलाई यो म्यागाजिनको नाम माहुरी राम्रो हुने मनसुवा पनि छ।
कृपया इमेल वा तलको कमेण्ट बक्समा लेखेर हामीलाई सुझाव दिई सहायोग गरिदिनुहोला ।आफुलाई जुन मनपर्छ त्यसको संकेतका लागि माहुरी, खालि र परदेशी भनेर लेखिदिनुहोला, धन्यवाद !
‘परदेशी’ वा ‘माहुरी’?